Ndepụta teknụzụ nka nke igwe mkpuchi mkpuchi ọtụtụ ihe
Ọnụ ụlọ mkpuchi
Ф1050 × 1250, 304 igwe anaghị agba nchara.
Ọnụ nke ime oghere mkpuchi
Ihe nkwado nkwado bụ 1680mm n'elu ala, adabara ergonomic ọrụ elu.
Ihe njide nkwado bụ 1468mm n'elu ala, adabara ergonomic ọrụ elu.
Ihe njide nkwado bụ 1510mm n'elu ala, adabara ergonomic ọrụ elu.
1.Arched diski otu-workpiece, izute ndị ahịa’ mkpa maka ịdị n'otu ruo n'ókè ka ukwuu. Mgbanwe 5-30r/min, mgbanwe stepless ọsọ.
2.The arched atọ workpiece diski, mgbanwe ụwa na ntụgharị, iji gboo mkpa ndị ahịa maka ikike imeputa oke .Rotation 5-30r/min, mgbanwe stepless ọsọ.
Dị na akụkụ anọ, enwere ike idozi akụkụ nke ihe nkwado ahụ, iji gboo mkpa ndị ahịa maka ịdị n'otu ruo n'ókè ka ukwuu. Mgbanwe 5-30r/min, mgbanwe stepless ọsọ.
Arched diski otu-workpiece, izute ndị ahịa’ mkpa maka ịdị n'otu ruo n'ókè ka ukwuu. Mgbanwe 5-30r/min, mgbanwe stepless ọsọ.
Nkeji: mgbapụta mgbapụta DIP-12000 (Leybold), Mgbọrọgwụ mgbapụta ZJY-300, igwe mgbapụta 2X-70, mgbapụta mmezi 2X-8.The pipeline bụ 304 igwe anaghị agba nchara.
Nkeji: Mgbapụta mgbapụta KT-400 (Zhenhua), Mgbọrọgwụ mgbapụta ZJY-150, igwe mgbapụta 2X-70, mgbapụta mgbapụta 2X-8.
Nkeji: mgbapụta mgbasa KT-600 (Zhenhua), Mgbọrọgwụ mgbapụta ZJY-600, igwe mgbapụta 2X-70, mgbapụta mgbapụta 2X-8.
Nkeji: Mgbasa mgbasa KT-800 (Zhenhua), Mgbọrọgwụ mgbapụta ZJY-600, igwe mgbapụta 2X-70, mgbapụta mgbapụta 2X-8.
Ultimate agụụ: mma karịa 4 × 10-4 Pa.
Ejiri ngwaọrụ mgbochi ọgba aghara, imewe mgbachi nchedo, akwụkwọ ntuziaka na akpaka nhọrọ.
Usoro kpo oku na kpo oku tube, Njikwa PID, karịa 350 ℃ ± 1.5 ℃.
Ọnụego gas na -arụ ọrụ
Ngwá ọrụ njikwa gas na-asọ asọ ma ọ bụ ntuzi aka nke valvụ mmụba.
Mgbasa ikuku ionization
DC 3KV, 06KW mkpanaka cathode (eji ehicha ebe ọrụ tupu mkpuchi).
Isi mmalite evapo (nhọrọ)
1. TELEMARK-270 ° egbe elektrọn (mbubata), 6KW, nnukwu voltaji 4KV-10KV nwere ike idozi, triangle ife efe, okirikiri i scanomi, ọmarịcha ntụpọ ntụpọ na -elekwasị anya, izi ezi dị elu, na ezi scanning reproducibility.
2. Egbe eletrọnịkị ụlọ (Zhenhua): 6KW, nnukwu voltaji 4KV ～ 8KV, nwere ike họrọ ife triangle, enweghị ife, akụkụ anọ na -enyocha nyocha n'efu.
3. Ọkụkụ: oghere isii Φ38 × 20 Crucible ma ọ bụ oghere anọ Φ38 × 20 gbakwunyere igbe nwere arc nwere oghere nwere ogologo arc etiti. 87 (eji maka oriri dị elu nke ihe na -agbaze ala na -agbaze ala) ma ọ bụ oghere anọ Φ48 × 18 iko.
Isi mmalite Ion (nhọrọ)
1. RF (Ugboro Redio) Isi mmalite Ion (Bubatara).
2. 5Isi mmalite ion Hall KVA (nke Zhenhua mepụtara), eji maka nhicha tupu electroplating ma ọ bụ plating inyeaka na usoro nhọpụta, nke bara uru iji melite ndegharị ihe nkiri ahụ, nke siri ike, na njupụta na nrapado ihe nkiri ahụ.
Sistemụ njikwa ọkpụrụkpụ ihe nkiri (nhọrọ)
1. Onye njikwa kristal MDC-360 (mbubata) nwere ike ịchekwa akwa 1 ～ 99 nke usoro mkpuchi akpaka, 99 ụdị data mmemme, izi ezi 0.5%+1? Error.2TELEMARK-880 kristal njikwa (mbubata): nwere ike ịchekwa akwa 1 ～ 99 nke usoro mkpuchi akpaka, 99 ụdị data mmemme. 精度 0.5%+1? Mperi edoziri.
3. TELEMARK-820 onye na-ahụ maka ngwa anya (mbubata): na-anabata teknụzụ nyocha njedebe ngwụcha nwere ọtụtụ ebili mmiri, ma na -ekpe ikpe ngwụcha ihe nkiri ahụ site na inyocha transmittance (ma ọ bụ reflectance) akụkụ nke mpempe akwụkwọ nyocha 370-870 mm.Ezi njikwa ziri ezi, otu njikwa ebili mmiri, Enwere ike iji njikwa akpaka yana njikwa akwụkwọ ntuziaka ngụkọ ihe nkiri MACILEOD, ogo dị elu nke mwekota.
4. Onye na-ahụ maka ngwa anya TELEMARK-820 na onye na-ahụ maka kristal TELEMARK-880 nwere ike mezuo ihe chọrọ nkenke dị elu yana mkpuchi mkpuchi ugboro ugboro..
5. Onye na -ahụ maka ngwa anya ụlọ (dị ka 9704 monochromator kwekọrọ, wdg), ogologo ntụgharị nwere ike idozi site na 330 na 870, na izi ezi nwere ike iru ± 1.5nm.
Na ntọala magnetik, enwere ike idowe ya n'ọnọdụ ọ bụla nke ọnụ ụzọ oghere oghere na kabinet nchịkwa.
1.The sputtering akụrụngwa bụ mgbagwoju anya na-achọ a elu-voltaji ngwaọrụ: Etu esi ahazi teknụzụ magnetron sputtering？